यस्ता आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नुहोस्,जसले को’ रोनाबाट बचाउन सक्छ ! – Annapurna Daily
यस्ता आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नुहोस्,जसले को’ रोनाबाट बचाउन सक्छ !
On Jun 10, 2021 506
को’रोना (को’भिड–१९) सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले आतङ्कित भएको बेला रोग लाग्नै नदिने उपायतिर धेरैको ध्यान गएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिन आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।
यसका लागि जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्न राजधानीको नरदेवीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्देशक डा। प्रदीप केसी जोड दिन्छन् ।
यस मिश्रणमा भाइरसजन्य रुघाखोकी, सिजनल फ्लु, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, अरुचि, गन्धनाश हुने आदि लक्षणलाई निर्मूल पार्न चाहिने सक्रिय तत्वहरू रहेको कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नै देखिएको डा। केसीको भनाइ छ ।